Milina fanamafisam-peo - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Fitaovana elektronika matanjaka amin'ny mpanohitra fanoherana
Ny fangejana fanoherana dia ny manindry ny sangan'asa mba hampidinina eo anelanelan'ny electrodes roa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanovozana avo. Izy io dia fomba iray ananan'ny hafanana fanoherana ateraky ny ankehitriny mivezivezy eo amin'ny sehatry ny fifandraisan'ny sangan'asa ary ny faritra mifanila aminy dia ampiasaina hanefana azy io hivezivezy na fanjakana plastika hamatotra ny vy. Ny lasitra fanoherana lehibe dia amin'ny endrika welding welding, welding welding, welding amin'ny projet ary welding welding.
Ny fampiroboroboana ireo indostria maoderina toa ny fiara mandeha, ny sambo, ny fiaramanidina ary ny lalamby haingam-pandeha dia mitaky milina fanamafisam-peo fanoherana avo lenta sy avo lenta ary ny diode ultra-high diode ankehitriny satria tena ilaina ny singa lehibe.
Miaraka amin'ny fanavaozana tsy tapaka sy ny fahaizan'ny fikarohana mahery vaika, Runau Electronics dia namolavola diode avo lenta avo lenta nasongadina tamin'ny hakitroky avo lenta avo lenta, ny herinaratra ambany dia ambany ary ny fanoherana hafanana ambany dia ambany izay afaka mifanindran-dàlana mivantana, wafer silika manify, herinaratra ambany ambaratonga, fanoherana ny tehezan-tendrombohitra kely, mari-pana ambony fihaonana, famafazana volamena na platinina ampiarahina amin'ny fantsom-pandrefesana elektronika hifehezana ny fiainana vitsy an'isa, mampihatra fantsom-pifandraisana anode ambany sy teknolojia faritra misy ifotony mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanarenana malefaka haingana sy haingana. Ny diode fonosina anaty trano sy tsy misy trano. Ny diode fantsom-panafody avo lenta dia azo raisina amin'ny welder fanoherana miaraka amin'ny matetika avy amin'ny 1KHz ka hatramin'ny 5 KHz.
Diode fanamafisam-peo ankehitriny avo lenta List
TOSIKARATRA hatramin'ny 400V
~ 200 400